Simon Khaya Moyo - Latest News and Backstory
...he defended his wife's entry into politics and criticized people for badmouthing her.On Thursday, spokesman Simon Khaya Moyo of the ruling ZANU-PF party announced the suspension from the party of Cabinet Minister Chris Mutsvangwa and several...
Zimbabwean President Reshuffles Cabinet, Vps Sworn in
Cihan News Agency (CNA) - December 12, 2014
...investing companies to cede majority stake to black Zimbabweans. For other appointments, former party national chairman Simon Khaya Moyo was appointed minister of economic planning following the abolition his post in the party. Former deputy finance...
Zanu-pf Likely to Amend Its Constitution to Get Rid of Mujuru ...
...very surprised if she goes for the VP post. "It may go to a former senior member of the old Zapu, so that might be Simon Khaya Moyo, who may also keep his present temporary position as spokesman," said a long-time party observer, who asked...
Mugabe in Last-minute Push for Votes Veteran Leader Promises ...
The Sunday Independent (South Africa) - July 28, 2013
...Zimbabwe's bankrupt state - including Bulawayo's moribund economy. Former Zimbabwe ambassador to South Africa, Simon Khaya Moyo, who is now Zanu-PF national chairman, organised the rally at White City Stadium. Local rich Zanu-PF elite...
Africa Ivory Sales Ban Lift Sought
...critically important that we reconcile nature and legitimate human needs in ways that serve both humans and wildlife,'' Simon Khaya Moyo, head of the Zimbabwe delegation, told a news conference. Kenya and India want elephants to remain on Appendix...
...other recent clashes.In an intense campaign dominating radio and television reports Wednesday, ZANU-PF chairman Simon Khaya Moyo, the fourth-ranked official in Mugabe's party, told the broadcaster that rivals in the nation's two-year...
Un Donates 2,000 Tents for Foreigners Displaced by Xenophobic ...
...government had sent 10 buses and two trucks to pick up 1,000 Zimbabweans who wanted to return home. Ambassador Simon Khaya Moyo said the vehicles would leave Johannesburg on Saturday, and the returnees would be given land for resettlement...
Mugabe: Zimbabwe's Unity Govt Has 'short Life'
...s other vice president to replace Joseph Msika, who died this year. Zimbabwe's ambassador to South Africa, Simon Khaya Moyo, will take over from Nkomo as party chairman. The party has been long divided over who should eventually succeed...
Refugees Flood Sa Cities.(news)
Sunday Tribune (South Africa) - July 29, 2007
...Zimbabwe, but permits are required to import bulk foodstuffs for re-sale. "There are no new regulations coming into effect pertaining to this subject as has been pronounced by various media," said Ambassador Simon Khaya Moyo in a statement.
Tsvangirai Rejects Mugabe's Advances.(news)
The Mercury (South Africa) - November 13, 2008
...unilaterally this week or next, but has since been holding back. Sources said Mugabe had sent a senior emissary, Simon Khaya Moyo, a former cabinet minister and Zimbabwe's ambassador to South Africa, to try to persuade Tsvangirai to come home...